အဆိုးမြင်တတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
အဆိုးမြင်တတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု
အဆိုးမြင်တတ်ခြင်းက သင့်ကို အမြဲတမ်း အပျက်သဘောခံစားရစေပြီး အချိန်တိုင်းကြောက်လန့်စေရုံသာမက ဘဝမှာ အသစ်အဆန်းတွေကို မစမ်းသပ်မိအောင်လည်း တားဆီးပေးပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင် အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းက ဘဝမှာ ရှေ့ဆက်တိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ကလေးဘဝတုန်းက ဂရုမစိုက်မှုတွေ ၊အကောင်းမြင်မှုတွေ ရှိခဲ့တာတွေကို သတိရပါ။ .အခု သင်ဟာ အသက်ကြီးလာပြီး၊ ပိုပညာရှိလာပြီး အပြစ်သာမြင်တတ်သူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ပိုရှိလာတာကြောင့် ဘဝက ခက်ခဲလာသလို ဘဝက ကျွန်မတို့ကို အဆိုးမြင်ဝါဒီအဖြစ်သို့ ပုံသွင်းစေတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတဝက်မရှိဘူးလို့ မြင်နေရင်တောင် သင့်မှာ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။
သင့်အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ နောက်မကျသေးပါဘူး။ အဆိုးမြင်တတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုရပ်တန့်မလဲ? “glass-half-full”(ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတစ်ဝက်ရှိတယ်လို့မြင်တဲ့) လူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
သင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမှန်တရားကို လိုချင်ရင် သင့်အတွေးတွေဟာလည်း အတူတူထင်ဟပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို့မှာ မကောင်းတဲ့နေ့တွေ ရှိယုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက သင်ဟာ အဆိုးမြင်တတ်သူဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြချက် အနည်းငယ်ပါ။
“ဒါကို လုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ဆိုတာထက် ဒါကိုမလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ” ဆိုတာကို အမြဲတမ်းတွေးပါတယ်။
အကြောင်းအရာတွေက မှားယွင်းသွားတဲ့အခါ ထိတ်လန့်မသွားပါဘူး။
negative self-talk တွေမှာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံး (သို့) တစ်ချို့က သင်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေရင် သင်ဟာ အဆိုးမြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်။ အောက်မှာ သင်အဆိုးမြင်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၁၀)ခုရှိပါတယ်။
၁။ မကောင်းတဲ့ အတွေးတိုင်းကို ကောင်းတဲ့ အတွေးနဲ့ အစားထိုးပါ
နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျက်သဘောနဲ့ တွေးနေတယ်၊ စိတ်ရှုပ်စေတဲ့ အတွေးတွေကို စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိရင် အဲ့ဒီနေရာမှာ ရပ်တန့်ပြီး အကောင်းမြင်အတွေးနဲ့ အစားထိုးပါ။ ဒါက ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုပျော်ရွင်စေပြီး သင့်ဘဝကို တန်ဖိုးတတ်စေမယ့်အရာမှန်သမျှကို စဉ်းစားပါ။ အဆိုးမြင်ဝါဒကို အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ အဆက်မပြတ် အစားထိုးတဲ့အခါ သင့်ဦးနှောက်က အပြုသဘောနဲ့ ပိုတွေးဖို့ ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်မှာ မရှိတဲ့ အရာတွေထက် ရှိတဲ့အရာတွေပေါ် အာရုံစိုက်တဲ့အခါ သင့်ဘဝမှာ ကြွယ်ဝမှုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို့ဘဝမှာ သေးငယ်တဲ့အရာတွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အရာရာကို အလုံအလောက် တန်ဖိုးမထားကြပါဘူး၊ ဒါက negative ဆန်တဲ့သဘောထားကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတာက ကမ္ဘာကြီးကို ရှု့မြင်တဲ့ မှန်ဘီလူးကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့် သင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ အရာငါးခုအကြောင်း ရေးပါ။
၃။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေကို ရှုံးနိမ့်မှုအဖြစ် ရှုမြင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ
ကျွန်မတို့ဟာ ကမ္ဘာပျက်သွားသလို တွေးခြင်းဖြင့် ဘဝရဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကို အကျယ်ချဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက အတားအဆီးတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတယ် ။ သူတို့က ဘဝလို့ ကျွန်မတို့ ခေါ်တဲ့ package deal အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်အမြင်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဝက သင်ယူမှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်ဖြစ်ထွန်းဖို့ သူတို့က ကူညီပေးနေပါတယ်။ သူတို့ဆီကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပါ။ လုံးဝလက်လျှော့ အရှုံးပေးချင်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ အဲဒီကနေ သင်ဘယ်လို သင်ယူနိင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
၄။ အခြားသူတွေအတွက် ကောင်းတဲ့အရာတွေ လုပ်ပါ
သင့်ရဲ့အဆိုးမြင်အတွေးခေါ်ကို အကောင်းမြင်အတွေးတွေနဲ့သာ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အား အဆိုးမြင်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေပြီး ဘယ်အရာက သင့်ကို အပြုသဘောခံစားရစေဖို့ ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ကြင်နာခြင်းနဲ့ တခြားသူတွေအတွက် ကောင်းတာလုပ်ပေးခြင်းပါ။
ကမ္ဘာကြီးက ပြန်ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သင်ထင်ရင် ဒါကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ကူညီမယ့် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါစေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြုံးအောင်လုပ်ပါ။ စားပွဲထိုးအတွက် ကောင်းတဲ့အကြံပေးချက် ထားခဲ့ပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ကို ကူညီတာမျိုး၊ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ချီးမွမ်းပေးတာမျိုးလုပ်ပါ။ သူတစ်ပါးအကျိုးအတွက် ကောင်းတာလုပ်ပေးတဲ့အခါ ဝမ်းမြောက်မှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၅။ အဆိုးမြင်မှုတွေကို လွှတ်ထုတ်ပေးမယ့် ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှာပါ
သင့်အတွေးတွေက လုပ်ရပ်တွေအဖြစ် အလိုအလျောက် လမ်းကြောင်းဖော်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်မှာ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေရှိရင် သူတို့က negative energy တွေ ထုတ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို လုပ်နေခြင်းသို့ လမ်းကြောင်းဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ kickboxing ကစားခြင်း (သို့) မျိုသိပ်ထားရတဲ့ ခံစားချက် စွမ်းအင်တွေကို လွှတ်ထုတ်လိုက်ပြီး သင့်ကို ပျော်ရွင်စေမယ့် အရာတစ်ခုခု လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူကို ပြောတဲ့နည်းအတိုင်း သင့်ကိုယ်သင်ပြောပါ
ကျွန်မတို့က ကျွန်မတို့ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်နိုင်ပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုးတတ်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း အပျက်သဘော မပြောပါနဲ့။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်ပေးတဲ့ အလားတူသနားကြင်နာမှုမျိုး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ဖြည့်ဆည်းပေးပါ။
၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆိုးမြင်သူအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါနဲ့
အဆိုးမြင်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေလိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆိုးမြင်သူလို့ တံဆိပ်မတပ်ပါနဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေတ္တာတစ်လုံးထဲမှာ မထည့်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တံဆိပ်ကပ်တဲ့အခါ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကန့်သတ်ချက်ချမိတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆိုးမြင်သူလို့ တံဆိပ်ကပ်မယ်ဆိုရင် အဆိုးမြင်သူတစ်ယောက်လို တွေးပြီး လုပ်နေမိပါလိမ့်မယ်။
ဒီတံဆိပ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ကျော်လွန်ကြည့်ပါ။ သင်ဟာ ကောင်းတဲ့နေ့တွေရော၊ ဆိုးတဲ့နေ့တွေတပါရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံဆိပ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေတ္တာတစ်လုံးထဲကနေ ထွက်ကြည့်ပါ။ သင်လိုချင်တဲ့အရာ၊ အကောင်းမြင်သူတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၈။ အပြုသဘောစွမ်းအင်တွေ ပေးတဲ့သူတွေနဲ့သာ ဝန်းရံပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆိုးမြင်ဝါဒီတစ်ယောက်လို့ထင်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အလားတူအတွေးမျိုးရှိသူတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုဖယ်ရှားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ ၊ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် သင်လုပ်ရပါမယ်။ သင့်ဘဝကို ရှေ့ဆက်လှမ်းလိုပါက ဒီလိုအမူအကျင့်တွေနဲ့ လူတွေကို ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူတွေက အဆိုးမြင်အတွေးတွေ ထပ်ထည့်ပေးနေတယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့သစ်တွေကို ရှာပါ။
၉။ သင်ရင်ဖွင့်နိုင်မယ့်သူတစ်ယောက်ကို ရှာပါ
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မတို့လိုအပ်တာက ကျွန်မတို့ကို နားထောင်ပေးမယ့်သူ၊ နားလည်ပေးမယ့်သူဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ့်အတွေးတွေကို မျှဝေဖို့ အရင်းအမြစ်ပေးစွမ်းမယ့် သူတစ်ယောက်ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရင်ဖွင့်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှာနိုင်ရင် အဆိုးမြင်တာတွေ ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ negative အတွေးတွေ မျှဝေရင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ negative အတွေးတွေ အားလုံးထွက်သွားပါစေ။ ကိုယ်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သင့်အား နားထောင်ပေးသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
၁၀။ သင့်ဘဝမှာ လှုပ်ရှားမှု ထည့်သွင်းပါ
လှုပ်ရှားမှုက ကျွန်မတို့မှာ ကြာမြင့်စွာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက Work out လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်စွမ်းအင်တွေကို လွှတ်ထုတ်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုံ့ဆော်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တင်းကျပ်မှုတွေ၊ အဆိုးမြင်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လွှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်စိတ်က ပိုအာရုံစိုက်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်စိတ်က မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကို ဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင် လမ်းလျှောက်ပါ၊ ပြေးပါ။ သင့်အား ပိုအကောင်းမြင်တတ်စေဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။